အမှားကင်းကင်းနဲ့ပြီးပြည့်စုံဖို့လိုအပ်သလား ? – Gentleman Magazine
08/06/2017 14/06/2017 mmgentlemanmagazine
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]အမှားကင်းကင်းနဲ့ပြီးပြည့်စုံဖို့လိုအပ်သလား ?
ဘာမဆို ပွီးပွညျ့စုံဖို့ လိုအပျသလား ?
ဘယျကိစ်စမဆို အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ လုပျတာက မှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာမဆို ခွောကျပွဈသဲကငျးစငျ ပွီးပွညျ့စုံနအေောငျ လုပျဆောငျတာကရော အလအေ့ကငျြ့ကောငျးတဈခုလို့ ထငျပါသလား။ အားလုံးကို ပွီးပွညျ့စုံအောငျလုပျဆောငျတာက လူတိုငျးကို ကနြေပျစလေိမျ့မယျလို့ ခံယူထားပါသလား။ ငယျရှယျစဉျကြောငျးသားဘဝမှာတုနျးကတော့ အိမျစာတှေ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို ဘာတဈခုမှ ထောကျပွစရာ မရှိအောငျ လုပျလာရငျ ဆရာဆရာမတှရေဲ့ ခြီးကြူးတာကို ခံရမှာတော့ သခြောပါတယျ။
အခြိနျတနျအရှယျရောကျလာတဲ့အခါမှာ ငယျစဉျကထကျ တာဝနျယူစရာကိစ်စတှေ မြားမွောငျလာပွီး အားလုံးကို ထောကျပွစရာမရှိအောငျ လုပျဖို့ဆိုတာ မလှယျတော့ပါဘူး။ အိမျအလုပျတှေ၊ မိသားစုအရေးကိစ်စတှေ၊ စီးပှားရေးကိစ်စတှေ၊ လူမှုရေးကိစ်စစသဖွငျ့ တာဝနျတှအေမြားကွီးရှိလာတတျပါတယျ။ ဒီအခါမှာ ဘယျကိစ်စကိုမှ အပွဈပွောစရာမရှိတဲ့အထိ ပွီးပွညျ့စုံအောငျ လုပျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဒီလို စိတျတိုငျးကြ ကနြေပျတဲ့အထိ ပွီးပွညျ့စုံအောငျ မလုပျနိုငျတော့တဲ့အခါမှာ စိတျသောက ရောကျရပါလိမျ့မယျ။ ငယျငယျတုနျးကလို ပွီးပွညျ့စုံမှုကွောငျ့ ရရှိတဲ့ စိတျပြျောရှငျမှု၊ ငွိမျးခမျြးမှုနဲ့ ပြျောရှငျမှုတှကေို ခံစားရတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ ဒီလို မကမြေနပျစိတျကွောငျ့ပဲ ဘာပဲလုပျလုပျ စိတျတိုငျးမကနြိုငျပဲ ဘဝက အဆငျပွမှောမဟုတျတော့ပါဘူး။
အားလုံးကို ပွီးပွညျ့စုံအောငျ လုပျခငျြနတေဲ့ စိတျကွောငျ့ အခြိနျစောငျ့ရငျးနဲ့ လုပျစရာရှိတာတှေ နှောငျ့နှေးကွနျ့ကွာသှားတတျပါတယျ။ စီးပှားရေးလုပျငနျးမှာလညျး ရှမေ့ဆကျနိုငျပဲ ရပျတနျ့နတေတျပါတယျ။ တကယျတမျးတော့ ပွီးပွညျ့စုံခငျြတဲ့စိတျဟာ ကွောကျစိတျရဲ့ အသှငျကှဲတဈခုပဲဖွဈပါတယျ။ အမှားလုပျမိမှာကို ကွောကျတဲ့စိတျ၊ အခွားသူတှေ စိတျပကျြသှားမှာကို ကွောကျတဲ့စိတျ၊ အရှကျရမှာ၊ အလဟဿဖွဈသှားမှာကို ကွောကျတဲ့စိတျပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကွောကျစိတျကွောငျ့ပဲ ဘာကိုမှာ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးမရှိတော့ပဲ သာမနျအဆငျ့မှာပဲ ရပျတနျ့နစေမှောဖွဈပါတယျ။ ပွီးပွညျ့စုံအောငျ လုပျဆောငျတာက ကြှနျတျောတို့ကို အလုပျမြားစနေိုငျရုံအပွငျ စဈမှနျတဲ့အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးပျေါကို ရောကျစမှော မဟုတျပါဘူး။ ပွီးပွညျ့စုံအောငျ ကွိုးစားရငျ အောငျမွငျတိုးတကျမှုတှေ ရှိနသေလို ထငျရစပွေီး တကယျတမျးတော့ ဒုံရငျးက ဒုံရငျးပဲ ဖွဈနမှောပါ။
ဒါ့ကွောငျ့ ဘာမဆိုပွီးပွညျ့စုံအောငျ လုပျခငျြတဲ့စိတျကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့လိုပါတယျ။ ကားတဈစီးကို မထိနျးခြုပျခငျြတော့ဘူးဆိုရငျ အရငျဆုံးရပျလိုကျဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီလိုပါပဲ။ ဘာမဆို ပွီးပွညျ့စုံအောငျ လုပျခငျြတဲ့စိတျကို ထိနျးခြုပျခငျြတယျဆိုရငျ အရငျဆုံးရပျလိုကျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ယုံကွညျမှုရှိရှိနဲ့ လုပျစရာရှိတာကို လုပျလိုကျပါ။ အကောငျးဆုံး အပွညျ့စုံဆုံးဖွဈဖို့ထကျ လုပျဖွဈဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။ ယုံကွညျမှုဆိုတာက လှကေားထဈတှကေို မမွငျရသေးခြိနျမှာ ပထမဆုံးခွလှေမျးကို လှမျးတကျရဲတဲ့စိတျ ဖွဈတယျလို့ လူမဲအခှငျ့အရေးလှုပျရှားသူ Martin Luther King, Jr က ပွောခဲ့ဖူးပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ရညျမှနျးခကျြ အစီအစဉျက ထောကျပွစရာမရှိအောငျ ပွီးပွညျ့စုံနဖေို့ မလိုပါဘူး။ အားလုံးကို ပုံဖျောနိုငျစရာဖွဈဖို့ မလိုပါဘူး။ စပွီးလုပျဖွဈဖို့ပဲလိုတာပါ။ ဒီတော့ အမှားကငျးကငျးနဲ့ ပွီးပွညျ့စုံဖို့ စိတျကူးကိုရပျပွီး ပထမဆုံးခွလှေမျးကို စ လှမျးရငျး ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျဆီကို ခြီတကျလိုကျပါလို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
ဘယ်ကိစ္စမဆို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်တာက မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာမဆို ခြောက်ပြစ်သဲကင်းစင် ပြီးပြည့်စုံနေအောင် လုပ်ဆောင်တာကရော အလေ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုလို့ ထင်ပါသလား။ အားလုံးကို ပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆောင်တာက လူတိုင်းကို ကျေနပ်စေလိမ့်မယ်လို့ ခံယူထားပါသလား။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကျောင်းသားဘ၀မှာတုန်းကတော့ အိမ်စာတွေ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ဘာတစ်ခုမှ ထောက်ပြစရာ မရှိအောင် လုပ်လာရင် ဆရာဆရာမတွေရဲ့ ချီးကျူးတာကို ခံရမှာတော့ သေချာပါတယ်။
အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ ငယ်စဉ်ကထက် တာဝန်ယူစရာကိစ္စတွေ များမြောင်လာပြီး အားလုံးကို ထောက်ပြစရာမရှိအောင် လုပ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်တော့ပါဘူး။ အိမ်အလုပ်တွေ၊ မိသားစုအရေးကိစ္စတွေ၊ စီးပွားရေးကိစ္စတွေ၊ လူမှုရေးကိစ္စစသဖြင့် တာဝန်တွေအများကြီးရှိလာတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ဘယ်ကိစ္စကိုမှ အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့အထိ ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလို စိတ်တိုင်းကျ ကျေနပ်တဲ့အထိ ပြီးပြည့်စုံအောင် မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါမှာ စိတ်သောက ရောက်ရပါလိမ့်မယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကလို ပြီးပြည့်စုံမှုကြောင့် ရရှိတဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင်မှု၊ ငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ခံစားရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို မကျေမနပ်စိတ်ကြောင့်ပဲ ဘာပဲလုပ်လုပ် စိတ်တိုင်းမကျနိုင်ပဲ ဘ၀က အဆင်ပြေမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
အားလုံးကို ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ချင်နေတဲ့ စိတ်ကြောင့် အချိန်စောင့်ရင်းနဲ့ လုပ်စရာရှိတာတွေ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာသွားတတ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလည်း ရှေ့မဆက်နိုင်ပဲ ရပ်တန့်နေတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ပြီးပြည့်စုံချင်တဲ့စိတ်ဟာ ကြောက်စိတ်ရဲ့ အသွင်ကွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှားလုပ်မိမှာကို ကြောက်တဲ့စိတ်၊ အခြားသူတွေ စိတ်ပျက်သွားမှာကို ကြောက်တဲ့စိတ်၊ အရှက်ရမှာ၊ အလဟဿဖြစ်သွားမှာကို ကြောက်တဲ့စိတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြောက်စိတ်ကြောင့်ပဲ ဘာကိုမှာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ပဲ သာမန်အဆင့်မှာပဲ ရပ်တန့်နေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ဆောင်တာက ကျွန်တော်တို့ကို အလုပ်များစေနိုင်ရုံအပြင် စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားရင် အောင်မြင်တိုးတက်မှုတွေ ရှိနေသလို ထင်ရစေပြီး တကယ်တမ်းတော့ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပဲ ဖြစ်နေမှာပါ။
ဒါ့ကြောင့် ဘာမဆိုပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ ကားတစ်စီးကို မထိန်းချုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင် အရင်ဆုံးရပ်လိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ။ ဘာမဆို ပြီးပြည့်စုံအောင် လုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးရပ်လိုက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်လိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံး အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်ဖို့ထက် လုပ်ဖြစ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ ယုံကြည်မှုဆိုတာက လှေကားထစ်တွေကို မမြင်ရသေးချိန်မှာ ပထမဆုံးခြေလှမ်းကို လှမ်းတက်ရဲတဲ့စိတ် ဖြစ်တယ်လို့ လူမဲအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ Martin Luther King, Jr က ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက် အစီအစဉ်က ထောက်ပြစရာမရှိအောင် ပြီးပြည့်စုံနေဖို့ မလိုပါဘူး။ အားလုံးကို ပုံဖော်နိုင်စရာဖြစ်ဖို့ မလိုပါဘူး။ စပြီးလုပ်ဖြစ်ဖို့ပဲလိုတာပါ။ ဒီတော့ အမှားကင်းကင်းနဲ့ ပြီးပြည့်စုံဖို့ စိတ်ကူးကိုရပ်ပြီး ပထမဆုံးခြေလှမ်းကို စ လှမ်းရင်း ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆီကို ချီတက်လိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]
Previous: မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်အောင် ဘယ်လို Chat မလဲ